Malunga nathi | IXESHA
Ulungelelwano olujoliswe kwiMfundo engaSondlo yoSondo
IXESHA "Ukumela amalungelo abazali"
I-CAUSE (Umdibaniso ngokuchasene neMfundo ngeZondo engakhuselekanga) yabizwa ngoJanuwari 2018 ukudibanisa amaqela ahlukeneyo abumba ngenxa yabazali abaninzi baphendula ngokutyhilelwa komxholo ongafanelekanga weSifundo esiBanzi sezeSondo esifana nenkqubo yokuqala ebizwa ngokuba yiZikolo eziKhuselekileyo, ezaqaliswa kwizikolo eziphantsi. Isikhokelo sokuba yinkqubo yokulwa nokuxhaphaza abanye. Nangona kunjalo, le yinkqubo engafanelekanga ngokwesondo eyilelwe ukwenza abafundi bangaziphathi ngendlela yokuziphatha ethandabuzekayo. Ngenxa yeenkxalabo zangaphambili zoluntu le nkqubo iphinde yabekwa amatyeli aliqela yaza yasetyenziswa kwizikolo eziphantsi kwamagama ahlukeneyo. Kodwa iingcinga eziphambili kunye neenjongo zihlala zifana.
Le program ayifanelekanga ukuba iboniswe kubafundi abakwiprayimari okanye kwizikolo eziziisekondari. Inemathiriyeli kunye neengcinga zesini, ezifundiswe ngaphandle kokuziphatha, zikhuthaza abafundi ukuba bazame ulwabelana ngesondo labo. Le nkqubo iphunyezwe kuzo zonke izifundo eziphambili ukuze kungenzeki ukuba sisuse umfundi kumxholo wale nkqubo ngaphandle kokuchaphazela imfundo yabo.
Yinjongo ye-CAUSE ukwenza uluntu lwazi malunga nokule nkqubo ngale ndlela nangayiphi na indlela esebenzayo nefanelekileyo, ngeyona njongo iphambili yokuqinisekisa ukuba ababoneleli bemfundo bayishenxisa ngokupheleleyo le nkqubo bayisongele ngenkqubo yokwenyani yokuxhaphaza abanye. I-CAUSE iceba ukulandela amalungelo omzali, apho zonke iinkqubo zesikolo ezizezesondo zibonakala ngokucacileyo kubazali. Ukuqinisekisa ukuba zonke iinkqubo zesondo zikwindlela apho abazali bagcina onke amalungelo, ngaphandle kokuthintela imfundo yabantwana babo, ukuba basuse abantwana babo kwezo klasi ngokubona kwabo.
Thina kwi-CAUSE siqinisekisa ukuba bonke abantu bayalingana ngexabiso.
Siyangqina nokuba, ngaphakathi komthetho wase-Australia, bonke abantu banelungelo lokuphila ngobomi babo njengoko bafuna.
Ngaphezulu, sikholelwa ukuba abantwana kufuneka bakhuliswe ngaphakathi kokuziphatha njengoko kufundiswe ngabazali babo.